Usoro Ọrụ. Forzọ maka ndị okenye iji hụ ibe ha na ntanetị
Ọrụ Sugarlove1 bụ maka naanị ndị okenye (ị ga-abụrịrị afọ 18).
Ọrụ Sugarlove® bụ ụzọ maka ndị okenye iji zute onwe ha n'ịntanetị.
Nke a bụ nkwekọrịta iwu kwadoro (“Nkwekọrịta”) dị n’etiti gị na Sugarlove®. Biko gụọ nkwekọrịta ahụ nke ọma tupu ịdebanye aha gị. Site na ịdebanye aha, ị ga-abụ onye otu Sugarlove® (“Onye otu”), ị kwenyere na iwu na ọnọdụ nke nkwekọrịta a (“Okwu”) ga-agbado gị ruo oge niile ị ga-abụ onye otu. Ọ bụrụ na ikwenyeghi na Usoro ndị ahụ, anaghị enye gị ikike iji Sugarlove®.
Nweta atụmatụ na arụmọrụ zuru oke site na ndenye aha VIP, gụnyere Nkata & Izi ozi nkeonwe.
IHE: Ị nwere ike Kagbuo your VIP Otu N'oge ọ bụla kpọmkwem site na Akaụntụ Gị! Ndị Nkwado Sugarlove® dị njikere oge niile iji nyere gị aka ma nyere gị aka 24/7. Naanị zitere anyị nkwado nkwado n'aka “Kpọtụrụ Anyị”Peeji nke na anyị ga-alaghachikwute gị n'ime ụbọchị azụmahịa 1!
Ndị otu VIP Gụnyekwara A Baajị VIP Badge Soro profaịlụ Gị.